यी हुन् मलेखुमा यात्रुलाई खानामा किरा परेको माछा बेच्ने होटलका मालिक ! | Diyopost - ओझेलको खबर यी हुन् मलेखुमा यात्रुलाई खानामा किरा परेको माछा बेच्ने होटलका मालिक ! | Diyopost - ओझेलको खबर
यी हुन् मलेखुमा यात्रुलाई खानामा किरा परेको माछा बेच्ने होटलका मालिक !
दियो पोस्ट बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ | २३:२९:०१
धादिङ, १७ भदौ । धादिङको मलेखु भन्ने वित्तिकै पृथ्वीराजमार्गमा यात्रा गर्नेहरुले ‘माछा’ सम्झन्छन् । माछाका कारण चर्चित भएकै कारण गजुरी गाउँपालिकाले मलेखु बजारमा माछाको प्रतिमा नै बनाएको छ । तर, माछालाई ब्राण्डिङ गनुपर्ने होटलवाला भने मलेखुकै बद्नाम हुनेगरी कुहिएको माछा विक्री गर्न थालेका छन् ।
विहिबार काठमाडौंबाट नारायणगढका लागि हिँडेको ग १ ख ३९७४ नम्बरको माइक्रोमा होटलमा खाना खान भन्दै मलेखुमा रोकियो । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका ३ मलेखु बिचबजारमा रहेको होटल हङ्ग्री बर्ड प्रवेश रिभर साउण्ड रेष्टुरेन्ट एण्ड गेष्ट हाउसमा मध्यान्न ११ बजे झरेका यात्रुले आफूलाई मन पर्ने खाना अर्डर गरे । यात्रु मध्येकै धनराज गिरीले माछासहितको खाना अर्डर गरे । आफूले अर्डर गरेको खाना आएपछि उनले सपासप खाना खाए । खानाको अन्तिम तिर उनले माछामा किरै किरा देखे ।
‘माछामा किरा देखेपछि मलाई वान्ता होला जस्तो भो । पेटमा समस्या आयो । र मैले फोटो खिचेँ । केहीबेरमा सबैलाई सार्वजनिक गरिदिएँ । त्यतिबेलासम्म मेरो पेटमा खराबी आइसकेको थियो,’ उनले दियोपोस्टसँग भने,‘केहीबेरमा मलाई औषधी नै खानुपर्ने अवस्था आयो । मलाई पखला नै चलेको थियो ।’
एक जना धन बहादुर मात्रै होइन पृथ्वीराजमार्गमा यात्रा गर्ने अधिकांश यात्रुले यस्तै समस्या झेल्नु परेको छ । तर, जिल्ला स्थित प्रशासन कार्यालयका हाकिमहरु भने नाम मात्रैको अनुगमनमा समय विताइरहेका छन् । विहिबारको घटनाको विषयमा भने जिल्ला प्रशासनले अनुगमन थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालको दाबी छ ।
को हुन् होटल मालिक ?
यसरी सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा गम्भिर खेलबाड गर्ने होटलका मालिक हुन् प्रकाश त्रिपाठी । उनले आजको घटनामा आफूहरुको गल्ती भएको सहजै स्विकार गरे ।
‘यत्रो वर्ष भयो मैले होटल चलाएको आजसम्म यस्तो भएको थिएन । तपाईं होटल हेर्न आउन सक्नुहुन्छ । यस्तो भएको थिएन । आज यस्तो भयो । म गल्ती स्विकार गर्छु । आज यो मिडियामा निकाल्दिन भएन,’ उनले भने,‘अब यस्तो गल्ति हुँदैन ।’
उनका अनुसार उक्त गाडीसहित उक्त होटलमा रोक्ने दर्जनौँ गाडीमा त्रिपाठीको लगानी छ । उनले होटल सञ्चालन गरेरै आधा करोड भन्दा महँगो पर्ने गाडी समेत खरिद गरेका छन् ।
बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ | २३:२९:०१